Hafatra Krismasy 2021 – FJKM
Faly miarahaba antsika ry havana nahatratra izao andro firavoravoana lehibe amin’ny Krismasy na Noely izao; ary faly mampita amintsika koa izao hafatra izao:
Jesoa Kristy no ankalazao rehefa Noely,
Jesoa Kristy fa tsy ny andro velively.
Toa alaim-panahy mantsy ny olona sasany ry havana hankalaza andro.
Indray mandeha, vao tsy ela izay, nandre hira tao amin’ny radio iray aho nanao hoe: Ry Noely ô, irinay ianao hitondra fifaliana; O ry Noely ô, irinay ianao hampihavana anay. Nahafinaritra ahy ny feony, mientanentana, fa nahavelona eritreritra ahy ny tonony. Angaha moa ny Noely no mitondra fifaliana, angaha ny andro Noely no mampihavana? Aiza i Jesoa Kristy amin’izany? Te hitaona anareo izahay ry havana malala tsy hizatra hiteny hoe « hankalaza ny andro Noely » na « hankalaza ny andro Krismasy »; fa hizatra kokoa hiteny hoe : « Hankalaza an’i Jesoa Kristy noho ny andro Noely, hankalaza an’i Jesoa Kristy noho ny Krismasy, mba hotsaroana hatrany ny hoe :
Izany no antso atao ry havana malala, ary izany antso atao izany; dia mba tsy ho marina amintsika izay nosoratan’i Paoly. Izao mantsy no nosoratan’i Paoly ho an’ny Kristianina tany Galatia : « Andro sy volana sy fotoana ary taona no tandremanareo fatratra, matahotra ny aminareo aho, fandrao dia nisasatra foana taminareo » (Gal 4.10,11)
Jesoa Kristy hatrany no tsy maintsy hatao ivon’ny fankalazana ataontsika, Jesoa Kristy no deraina, Jesoa Kristy no asaina ifantohan’ny saina sy ny fo amam-panahin’ny olona rehetra na ny zaza sy ny ankizy na ny tanora sy ny olon-dehibe. Fa Jesoa Kristy ry havana malala no fototry ny fifaliana lehibe izay ho an’ny olona rehetra araka ny hiran’ny anjely (Lio 2.10), ilay fifaliana tena izy.
Dia mirary Krismasy sambatra, ao amin’ny firaisana amin’i Jesoa Kristy ry havana malala ary dia Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany. Amena.
IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi, Filohan’ny FJKM.